အဘယ်သူသည်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအလောင်းတစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုတစ်ခုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ရှိသည်သလဲ? မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များပါဝင်သည်လုပ်ဆောင်သွားရန်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းအာဏာပိုင်များဖို့ရုရှားရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအရဆေးထိုး၏ခန္ဓာကိုယ်အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ: ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို ...
ကျွန်ုပ်သည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ 188 အရသက်သေအဖြစ်ဆင့်ခေါ်ခံရသည်။ မင်းသွားချင်ရင်သွားပါ သင်မသွားလိုပါ၊ သို့သော်သူတို့သည်သင်၏ drive ကိုကြေငြာပြီး၎င်းအားအတင်းဖိအားပေးနိုင်သည်။
သငျသညျ "လွတ်လပ်မှု၏ဆုံးရှုံးမှု", "လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်" အကြားခြားနားချက်ကိုရှင်းပြနိုင်ပြီးသူတို့တစ်ချိန်တည်းမှာလျှောက်ထားနိုင်သလဲ
သငျသညျ "လွတ်လပ်မှု၏ဆုံးရှုံးမှု", "လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်" အကြားခြားနားချက်ကိုရှင်းပြနိုင်ပြီးသူတို့တစ်ချိန်တည်းမှာလျှောက်ထားနိုင်သလဲ အတိုချုပ်ပြောရရင် ၀ န်ထမ်းပြီးတဲ့အခါသူတို့ကတစ်နှစ်လက်ကောက်၊ သူအတွက်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုဝတ်ရမည်။
လှဲသုံးစား, ခိုးမှုနှင့်ခိုးမှုအဖြစ်လုယက်မှုများနှင့်လုယက်အကြားဥပဒေကြောင်းအရခြားနားချက်ကဘာလဲ? ခြားနားချက်လမျး၌ပြစ်မှုများ, ပြင်းထန်မှုနှင့်အကျိုးဆက်များ၏ကော်မရှင်တည်ရှိသည်။ သို့သော်ဤအပေါငျးတို့သညျအခွားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၏ခိုးယူ၏ဆိုလိုတယ် ...
ငါသောအကျဉ်းသားတစ်ဦးဝါကျ odnokamerniki ်ထမ်းဆောင်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးကအင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ကြား၏။ အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာရန် ru ဟာနုံလူဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့အင်တာနက်ထဲမှာ ktozh ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။ Sasim ထဲသို့ morons? ယေဘုယျအား ...
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအဘို့အဘယ်သို့ပြစ်ဒဏ်များတည်ရှိ? အနုပညာ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေများ၏ 146 ။ မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဆက်နွယ်သည့်အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်။ ဇ။ 1 ။ ရေးသားခဲ့သော (plagiarism) ၏တာဝနျကို, ဒီလုပ်ရပ်ရေးသားသူမှအကြီးစားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေသို့မဟုတ်ပါလျှင် ...
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ခေါင်းစည်းကို အသုံးပြု၍ စစ်မှုထမ်းခြင်းအားဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်အထူးကူညီမှု၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း - စစ်မှုထမ်းရသည့်အသက်အရွယ်သို့ရောက်ရှိလာသူ၊ ရှိတယ် ...
အနုပညာနှင့်အညီအပိုဒ် 186 ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ 99 Code ကိုအဆိုပါသံသယတစ်ခုသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုနှင့်၎င်း၏၏ပြဌာန်းခွင့်ကျူးလွန်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရဆန့်ကျင်နေတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်အတိုင်းအတာရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ ...
ဝင်ငွေပုန်းအောင်းနှင့်၎င်းတို့အပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမပြုဘို့ကုမ္ပဏီများအတွက်ပြစ်ဒဏ်? အခွန်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများချိုးဖောက်များအတွက်ဒဏ်ငွေအခွန်ထမ်း '' တာဝန်ယူမှု။ အခွန်၏ကျရှုံးခြင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေး၏ရပ်ဆိုင်းမှု ...
ကမောင်းထုတ်ရန်နှင့်မခံမရပ်မှတ်ပုံတင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်အဘယ်အရာကိုပြစ်ဒဏ်, ဆေးခြောက်များအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ဖြစ်စျနိုငျသလဲ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကိုအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ :: အပိုဒ် 6.9 ပေးမထားဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု ...
ရှေ့ကနေလက်နက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်အဓိက parameters တွေကိုဘာတွေလဲ? အေးသံမဏိတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဘာသာရပ်များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု၏ပြဿနာသာမှုခင်းကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (1,2ဥပမာ) ၏ရလဒ်များကိုအားဖြင့်ဖြေရှင်းနေသည်။ ဒီလက်စွဲအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေက ...
နှစ်ဦးစလုံးစုံစမ်းအသင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့? စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့ဖြစ်သည့်ကိစ္စတွင်၏သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်. ။ ဒါပေမယ့်နံပါတ်နှင့်အရည်အသွေးဖွဲ့စည်းမှုကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးတချို့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ, အမျိုးမျိုးသောကျွမ်းကျင်သူတွေ operetivnyh န်ထမ်း mater သူတို့အားနည်းလမ်းရေတွက် ...
အဘယ်အရာကိုပြစ်ဒဏ်ပညတ္တိကျမ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများအတွက်လိုအပ်သနည်း 119 §။ ကြမ်းတမ်းသောခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်မှုကိုသတ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ခြိမ်းခြောက်မှု။ အားလုံးအထက်, ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်၏အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်လုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်မှတိုက်တွန်းလျှင် ...
စတီရွိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုအဲဒီမှာသွင်းထား? ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးကွက်တစ်ခုမြင်ကွင်းကိုနှင့်အတူခိုင်မာသောသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်းတ္ထုများရဲ့ရုရှားပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေတရားမဝင်စောင်ရေ၏ဆောင်းပါး 234 မရှိကြပါဘူး။ အပိုင်း 1 ။ တရားမဝင်ထုတ်လုပ်, အပြောင်းအလဲနဲ့, ဝယ်ယူ, သိမ်းဆည်းခြင်း, ...
ဘယ်နှစ်ယောက်တရားသူကြီးတွေနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးအတွက်? ၏သင်တန်းသည်ဤ freeloaders ah Zell 19 အပိုင်းပိုင်း။ ဒီဇင်ဘာလ 12 1993 ထံမှရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံဥပဒေခုံရုံးတရားသူကြီးများ 19 ၏ရေးစပ်ကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည် ...
အဘယ်အရာကို oboznochaet ယေဘုယျအားဖြင့်အရှေ့တိုင်းအနုပညာအတွက်လက်စာရွက်သပ်အထိမ်းအမှတ်မေပယ်ရွက်ပေါ်တက်တူးနှင့်အထူးသဖြင့်တက်တူးအတွက်ဆောင်းဦးကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအစမိတ်ဆွေတို့ကို (တရုတ်နှင့်ဂျပန်) ၏အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ...
အသနားခံစာကဘာလဲ? ကျေးဇူးပြု၍ မျက်မြင်သက်သေများကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပါ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ရာဇ ၀ တ်မှုပုဒ်မ 56 ကိုကြည့်ပါ။ သက်သေတစ် ဦး အနေဖြင့် 5) သည်အသနားခံစာများတင်သွင်းခြင်းနှင့်အရေးယူမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ တိုင်ကြားမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
စစ်ဆေးမှုမတိုင်ခင်စစ်ဆေးမှုဆိုတာဘာလဲ။ ဖြစ်ရပ်အားလုံးတွင်ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်နှလုံးသားသို့မဟုတ်ကျည်ဆန်ဖြင့်ဓားကိုင်ထားသောလူငယ်တစ် ဦး ၏အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့လျှင် ...
ဘယ်လောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါဝင်မခံခဲ့ရလျှင်ပေးနိုင်ပါသည်နှင့်မပယ်မရှားပါဘူး ... ဆောင်းပါး 228 / 14အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ... ငါ့ကိုပြောပါ?
ဘယ်လောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါဝင်မခံခဲ့ရလျှင်ပေးနိုင်ပါသည်နှင့်မပယ်မရှားပါဘူး ... ဆောင်းပါး 228 / 14အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ... ငါ့ကိုပြောပါ? ch4အနုပညာ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေများ၏ 228.1 10 ၏ထောင်ဒဏ်၏ပြစ်ဒဏ်ပေး ...
ထိုအ ... အားလုံးအတူတူပါပဲ, သငျသညျအဘယျသို့ထင်ပါသလဲ, seductive Yulia Sidorenko များအတွက်ယ Eugene Podbutskogo ထားကြလိမ့်မည်နည်း သူမ 13 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူလေးခဲ့တော်မူသောအနေဖြင့်ထိုလူ, ပြစ်ဒဏ်လွတ်မြောက်ရန် ... နိုင်ငံသားယုံကြည်: သူမမလူငယ်တစ်ဦးမိခင် ...